Forum serasera malagasy Fanazavana ny Bibidia faharoa - Dinika forum.serasera.org
Fanazavana ny Bibidia faharoa
Fitohizan'ny hafatra : Fanazavana ny Bibidia faharoa
Maranatha - 21/03/2013 06:00
Indro ny fanazavana ny bibidia faharoa.
RBNR: Misy roa izy ireo ary azoko antoka fa mahay mamaky ny tenin'ny frantsay ise.
didi10 - 21/03/2013 07:55
Mangataka famintinana avy aminao manokana hoe namana Maranatha raha tena resy lahatra amin'ireo voalaza ao ianao, sao mantsy sanatria miafina ao ambadik'ireo lien ireo fotsiny ihany ianao.
RBNIR - 21/03/2013 08:24
Mbola faly mizara hatrany, aleho averiko eto ity namana
Ao amin'ny Apokalipsy 13 no hilazana ny momba ireo bibidia 2 mpanompon'ny dragona (devoly).
Apok.13:1 bibidia voalohany : ilay bibidia niakatra avy amin'ny ranomasina.
Ny ranomasina dia midika ho vahoaka amin'ny faminaniana apokaliptika : azo adika io teny io hoe bibidia niakatra avy amin'ny vahoaka.
Efa nozaraiko tato @ ity rohy manaraka ity fa ao anatin'ny 2Eme Evènement http://forum.serasera.org/forum/message/m507bdfc0e9c94#m50af58caa4a24
no hiseho ilay bibidia (ilay voalohany io). Hiroborobo fatratra ilay fitoriana lehibe farany (tahaka ny t@ andron'ny apostoly no toriana ao dia tsy inona fa ilay fampianarana tsy misy kilema nolazain'ny apostoly paoly).
Hisy olona maro B dia maro B tsy hankasitra (noho ny fialonana, noho ny fankahalana, ary tsy fitiavana.....) ka hanandratra olona iray mba hitarika azireo hanohitra ilay fitoriana lehibe farany sy hanenjika ireo olona hitory ao @ 2 ème Evènement.
Hizara 2 mazava tsara ny antokom-pivavahana kristianina manomboka hatreo.
Etsy ankilany ireo manaraka ilay fampianarana tsy misy kilema izay hitory ny fahamarinana rehetra ao @ baiboly,
Etsy andaniny kosa ireo mitsangana hanohitra sy hanenjika izany izay hotarihin'ilay bibidia.
Eo no ho tanteraka ilay hoe « Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana, izay nampilazaina an'i Daniela mpaminany (Dan. 12. 11; 9. 27) (aoka hisaina izay mamaky izany), » (Mat.24:15) IZANY HOE FITSANGANAN'ILAY BIBIDIA VOALOHANY EO @ FITOERANA MASINA. izay tsy inona akory fa « .........., ka hiseho ilay lehilahin'ota, dia ilay zanaky ny fahaverezana, » (2 Tes.2:3) FISEHOAN ILAY LEHILAHIN OTA IHANY.
Samia ho tahin'ny Tompo daholo
sitlo - 21/03/2013 09:48
Angano angano arira arira, tsy izaho no mandainga fa ny olona taloha.
RBNIR - 21/03/2013 09:55
Dia mbola misaotra ny Tompo hatrany fa mbola afaka ny hisera eto indray.
Araka ny voasoratra ery ambony dia hisy vala lehibe 2 hihavaka tsara ao aorina ao:
1- VALAN NY FAHAMARINANA izay misy ireo olona miaina ary manaraka ny fampianarana tsy misy kilema ary hitory ao amin'ilay fitoriana lehibe farany.
2- VALAN NY BIBIDIA (na koa hoe fanjakan'i bibidia) izay tarihin'ilay bibidia ary hanenjika sy hamono ireo olona ao amin'ilay valan'ny fahamarinana.
Toy izao no hataon'ilay bibidia rehefa handray fanjakana izy :
« Ary hiteny hanohitra ny Avo Indrindra izy sy hampahory ny olo-masin'ny Avo Indrindra ary hitady hanova fotoana sy lalàna; ary hatolotra eny an-tànany ireo ambara-pahatapitry ny fetr'andro iray sy ny fetr'andro roa ary ny antsasaky ny fetr'andro. » (Dan.7:25)
1- Hiteny hanohitra ny Avo indrindra izy
2- Hampahory ny olo-masin'ny Avo indrindra izy (efa voalazako ery ambony)
3- Hanova fotoana sy lalàna izy (lalàn'Andriamanitra mazava ho azy)
Hisy ny didy avaokany ka ny kristianina rehetra dia hodidiny tsy maintsy hanaraka izany. Ny tena hisongadina dia ny didy momba ny Sabata.
Izay tsy hanaiky dia hosaziany, hosamboriny ary hovoina mihitsy aza.
« Ary lozan'ny bevohoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo! » (Mat.24:19)
« Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny Sabata no handosiranareo. » (Mat.24:20)
« Fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe, izay tsy mbola nisy toa azy hatrizay niandohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy intsony. » (Mat.24:21)
Dia hotanteraka eto ihany koa ilay voasoratra hoe : « mba tsy hisy hahazo hividy na hivarotra, afa-tsy izay manana ny marika, dia ny anaran'ny bibi-dia, na ny isan'ny anarany. » (Apok.13:17)
Izay indray aloha ry namana isany fa dia hotohizana ihany raha sitrapon'Andriamanitra
sitlo - 21/03/2013 09:59
Izy ity moa izany ilay hoe io fa tsy mila porofoina fa inoy fotsiny ihany. Izay tsy mino mankany amin'ny afobe. hehehe
RBNIR - 21/03/2013 10:13
Mba efa henon'ny namana sitlo v ny tantaran'i saoly (niova ho paoly) paul de tarse???
Toy izao no nambaran'ny baiboly momba azy namana :
« [Ny niovan'i Saoly ho Kristiana] Ary Saoly mbola nifofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny Tompo ihany, dia nankao amin'ny mpisoronabe izy » (Asa.9:1)
« ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny synagoga any Damaskosy, mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana* izany, na lahy na vavy. [*Gr: lalana] » (Asa.9:2)
Olona tsy mba nino toa anao izy namana, ary ny nataony an'ireo kristianina araka io voalaza io tena ratsy tokoa.
Indray andro dia tonga taminy ity manaraka ity :« Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin'i Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatretatra tampoka manodidina azy; » (Asa.9:3)
« Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny nalehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandre ny feo izy, nefa tsy nahita olona. » (Asa.9:7)
Afaka jerevanao ao amin'ny encyclopedie ny tantarany namana (fantatrao tsara fa efa nisy recherche sy fanamarinana ny zavatra zaraina @ encyclopédie namana) http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Tarse
TENA TIA ANAO JESOSY KRISTY TOMPO.
sitlo - 21/03/2013 10:19
Filma efa nandeha hoy ny fitenin'ny ankizy.
Maro no efa henoko hoe nisy feo niantso azy... fa rehefa tsy miorokoroka ny baiboly ireny dia lazaina fa feon'ny devoly.
Maranatha - 21/03/2013 10:24
Raha ity izay lazainao ity namana dia ny mikasika ilay bibidia voalohany daholo. Tsy haiko na hoe tena tsy mahaaraka ve ianao sa ahoana. fetr'andro iray sy ny fetr'andro roa ary ny antsasaky ny fetr'andro (Dan.7:25) anie efa tanteraka daholo e! T@ fotoana izay tsy nahazona nampiasa ny baiboly. Ka izay rehetra tratra mamaky baiboly dia na vonoina na gadraina. io ihany no 1260 andro. Ny hoe hanova fotoana sy lalàna izy efa tanteraka avokoa izany. Ny fotoana lasa: manomboka @ 12 ora alina no nanovany ny fiantombohan'ny andro izay ho tokony ho ny maty masoandro.
Ny lalàn'i tsitoha izay novan'ilay tandroka kely mikasika ny Didy faharoa sy sabata, sy ny nizarany ny Didy fahafolo ho roa.
Tena mbola asan'ilay bibidia voalohany avokoa izany fa hanampy azy eto ny Bibidia faharoa.
Ny bibidia voalohany= Vatican (ny Fitondrana papaly)
Ny sarin'ny bibidia= ireo alahadyiste rehatra manaraka ny fombany indrindra ny loteriana
Ny Bibidia faharoa= Etas-unied'Amerique.
Mangataka famintinana avy aminao manokana hoe namana Maranatha raha tena resy lahatra amin'ireo voalaza ao ianao, sao mantsy sanatria miafina ao ambadik'ireo lien ireo fotsiny ihany ianao
Misaotra @ fisalasalana. Jaona 14:9 Hoy ... taminy: Izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va Aho, ry didi10?
tsy ireo ihany aza ny lien afaka homena anao. fa mbola marobe. Ary tsy mialokaloka araka ny fihevitrao fa Pur-sabatiste sy efa nahazo fahazavana manokana mikasika ny bokin'ny apokalipsy sy daniela .
RBNIR - 21/03/2013 10:33
Aza maika namana maranatha a, mbola vao bibidia voalohany no zaraiko e, mbola ho avy ny hoe iza no sarin'ny bibidia, bibidia faharoa, inona ny dikan'ny hoe mandray marika sns...
Maharetra fa izay maharitra hatramin'ny farany no.....
RBNIR - 21/03/2013 10:40
Fa ilay izy mantsy ry namana tsy dia tsara tonga dia lazaina hoe iza na iza raha tsy efa voazava tsara @ antsipirihiny sady efa nentina ny tenin'Andriamanitra manamarina ilay izy.
Fahendrena izany ry namana.
« Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, » (2 Tim. 3:16)
Koa aza maika hiteny hoe i ranona na i ranona fa mba azavao tsara e, tsy mitovy aminao ny olona rehetra .
Miharena - 21/03/2013 14:23
Namaky ilay rohy napetraky ny namana Maranatha aho dia mahita fa mitovy amin'ny fitorian'ny mpitari-pivavahana maro eto amintiska ihany ilay izy. Asa hoe nandika fotsiny ve izy ireo sa nahazo ny faminaniana marina?
Ny olana amin'ny fanadihadiana toy ny ataon'io namana iray io dia tsy inspiration divine mihitsy amiko ilay izy fa interprétation de symboles (fomba fanaon'ny olomblelona te-hanamarina ny fomba fijeriny mba heken'ny hafa ho fahamarinana tanteraka (absolue na universelle) azo raisina).
Miteraka vesatra ny fanadihadiana toy ireny matetika ary mitarika adihevitra tsy hita lany ka tsy mampandroso mihitsy ary manototra ny tena finoana tsy misy pentina. Tantara tiana hateza na angano araka ny resaky ny namana Sitlo (ialàna tsiny amin'ny namana nanokatra ny lohahevitra).
Raha ny tantaran'i Saoly no resahana dia izay no atao hoe fahamarinana fa tsy ny fanomezana symboles. Fanahy miara-miaina no finoana marina ary tsy misy idiran'ny symboles. fahitana taratra an'i Kristy (manafoana ny firehana). Mazava miaina ao anaty (tsy misy idiran'ny eritreritra sy ny vokatry ny saina).
Ny fahefan'ny sain'olombelona no manome tontolo ratsy na tsara ary izy no mametraka ny tantara araka ny filazan'i Kristy extra-biblique hoe tsy misy devoly fa ao anatin'ny olona ihany ny devoly. Dia rehefa mandini-tena dia mahalala hoe ity ilay devoly tato amiko tato. Dia tokony hampianarina izany ny olon-drehetra fa tsy ampianarina resabe mandany andro.
Ny fanotaniana azo apetraka hovalin'ny namana misera dia hoe: Mandrafitra inona eo aminao ny fahafantaranao ireo symboles ireo? Manome hery ve? Hahazoana hery handravana izay tranga miseho ve? Rehefa tsy manome ireo vokatra ireo dia ialàna impito mandifotra olona satria ilay devoly tao anatin'ny olona mitarika amin'iny fanekena ireo resaka ireo no miresaka aminao fa tsy fanahy fahamarinana madio mangatsakatsaka.
Inona moa no mahatonga ny savorovoro ara-pinoana ankehitriny? Ny tsy fahalalàna hoe avy aiza no iandohan'ny fanadihadiana, avy ao amin'ny fiheverana (mety sarisary an-tsaina tsy manome ny tena fahamarinana) sa avy ami'nny zava-misy marina? Io no mahatonga ny tena hilaza hatrany hoe mifohaza fa aza matory na maka izay ambaran'ny hafa fotsiny ihany.
Maranatha - 22/03/2013 05:25
Misaotra aloha ny @ teninao hoe ilay devoly ao anatin'ilay olona mitarika @iny fanekena ireo resaka ireo no miresaka aminao fa tsy fanahy fahamarinana madio mangatsakatsaka.
Ny fahafantarana ireo symboles ireo dia mba hahafahana miala @ ity teny ity Apok 14:9 Ary nisy iray koa, dia anjely fahatelo, nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: Raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tànany,10 dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra, izay naidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miharoharo zavatra, sady hampijalina amin'ny afo sy solifara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny Zanak'ondry iry;
Ary ihany koa Izy dia miteny hoe Apok 18:4 Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe: Mialà aminy ianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy.
Namana Miharena diso fantatray izay hinoanay. Tena milaza aminao aho fa tsy izahay izao mihintsy no hanaradrenirano ka handeha hanaraka zavatra mampisalasala sy anaram-piangonana ka hanatavy ny mpitondra fivavahana @ fampianaran-diso, Manongotra izay tsy nambolen'i Ray izahay. ary tsy mametraka fisalasalana mihintsy izahay manaraka ireo teniny. Tsy matahotra milaza ny fahamarinana izahay,Ny hatahoranay dia sao mbola misy fahotana mbola tsy voabebakay mialoha ny fahatongavan'i Tomponay.
Ary aoka ho fantatrao tsara fa fahazavana nomen'i lanitra ho an'ny fiangonana fahafito farany avokoa no notrandrahan'ireo mpitondra fivavahana sabatista amin'izao ireo ny fahamarinana izay vohiziny ankehitriny dia ampiany kely mba tsy hitovizany @ hafa dia milaza izy fa izy no zavatra.
Miharena - 22/03/2013 10:38
Fantatra aloha fa heverinareo ho fahamarinana tanteraka izay ambaranareo. Nefa rehefa mivoaka ami'ny Baiboly ilay izy dia mampieritreritra hoe tena izay tokoa angaha moa no mahatonga ireo resaka nolazaina tao amin'ny Apok ireo?
Ny fanazavàna hafa tsotra dia tsy mba alefanareo eto fa izay heverinareo fa mahadika azy fotsiny, izay mbola misitery amin'ny namana maro, no toa mandeha hatrany.
RBNIR - 22/03/2013 10:45
Izaho tsy mitondra ny hevitro eto (raha ny hevitro no nentiko teto very daholo isika).
Baiboly no nentiko ary fampianarana avy amin'i JEsosy Kristy no nozaraina teto,
smileyah - 22/03/2013 12:00
Ny mariky ny bibidia amiko dia: fitiavam-bola, fitiavantena, fitiavam-boninahitra, fitiavana ny fahafinaretan'ny nofo sy ny rendrarendra maro isan-karazany, ny tsy fahamarinana,fitiavana ny filan-dratsin'ny nofo. Raha fehezina dia ny karazam-pahotana.
Miharena - 22/03/2013 15:54
Miombon-kevitra amin'ny namana Smileyah.
Hialana tsiny amin'ny namana RBNIR sy Maranatha sao dia heveriny fa manetry ny fahalalàna azo avy amin'ny fampianarana ny boky Apokalypsy ny tena. Ny tiana ambara dia ny tokony hametrahana azy eo amin'ny vanim-potoana izay tokony hazava tsara. Efa lasa ve sa mbola ho avy? Inona no zavamisy marina ankehitriny? inona no azon'ny mpandresy ao amin'ny Tompo efa zaraina ary amin'ny endriny manao ahoana? Inona no efa fampianarana vaovao mandeha araka ny fanambaràna ao amin'ny boky? Fampianarana misintona sy manala ny olona tsy ho roboky ny tsy fahalalàna ve no voizina sa fampahalalàna ara-tsoratra fotsiny? Hita ho mampandroso ve ny fampianarana sa efa lany andro? Hoatry ny betsaka ilay fanontaniana fa ialàna tsiny satria mampanadihady ny zava-misy sy mitranga etsy sy eroa.
Ny Fanahy Masina ao anaty ihany anefa no afaka manavaka ireo rehetra ireo.
RBNIR - 23/03/2013 20:18
Faly miarahaba an-tsika rehetra hatrany,
Aoka hazava aloha ny resaka fa h@ izao dia mbola tsy nilaza mihitsy ny tenako hoe iza ilay bibidia voalohany (tsy nilaza anaran'olona, na anarana fiangonana, na anarana firenena sns...)
Raha fitininina ny voalazako ery aloha dia hoe ny bibidia voalohany dia miakatra avy @ vahoaka ka ny antony hifidianan'i satana azy io dia mba hitarika fanjakana iray hanenjika sy hamono ireo olona hitory ny fahamarinana ao @ 2ème Evènement (ILAY FITORIANA LEHIBE FARANY).
Ny fanontaniana goavana dia hoe @ izao vanim-potoana izao sy ny mbola ho avy v dia mbola hotanteraka izany??? Amin'izao fotoana izao dia efa samy hajaina mantsy ny finoan'ny tsirairay ka ahoana no hahafahan'ilay bibidia hanantanteraka izany indray????
Ahoana no fomba hahafahany mandresy lahatra ireo firenena rehetra eto ambon'ny tany ka hahafahany mampanenjika sy mampamono ireo olomasin'ny Avo indrindra ireo manerana izao tontolo izao????
Araka ny voasoratra ao amin'ny apok.13:2 dia nahazo hery sy fahefana avy @ dragona (devoly) io bibidia voalohany io.
Toy izao no hahafahany mandresy lahatra ireo firenena rehetra eto ambon'ny tany.
« Ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibi-dia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. » (Apok.16:13)
« Fa fanahin'ny demonia ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao, mba hanangona ary ho amin'ny adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra Tsitoha. » (Apok.16:14)
Ny dragona (devoly), ny bibidia ary ny mpaminany sandokany dia hanao famantarana entiny mandresy lahatra ireo mpanjakan'izao tontolo izao (ireo filoham-pirenena rehetra hanjaka amin'izany vanim-potoana izany).
Rehefa resy lahatra ireo filoham-pirenena ireo dia hotanteraka amin'izay ny voasoratra ao @ Apok.11,12
Izany hoe tafavoaka avy amin'ny tany ilay bibidia faharoa (izay tsy iza tsy akory fa ny fikambanan'ireo filoham-pirenana hanjaka @ izany fotoana izany) ka ny ataony dia ny HANERY NY OLONA REHETRA AMBONIN'NY TANY MBA HANAIKY NA KOA HOE HIANKOHOKA EO @ ILAY BIBIDIA VOALOHANY.
iZANY HOE TEREN'IREO FILOHAM-PIRENENA IREO NY MPONINA REHETRA AMBONIN'NY TANY MBA HANARAKA NY DIDY REHETRA IZAY AVOAKAN'ILAY BIBIDIA VOALOHANY (INDRINDRA FA NY DIDY MOMBA NY SABATA IZAY HOFOANANY).
IZAY TSY HANAIKY DIA NY FANJAKANA REHETRA HISY @ IZANY FOTOANA IZANY MIHITSY NO HISAMBOTRA SY HAMONO IZAY REHETRA TSY METY.
FAMPAHATSIAHIVANA RY NAMANA ISANY:
IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA ARY IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA.
Izay indray aloha namana isany fa mbola hotohizana ihany raha sitrapon'ny Tompo,
Averiko indray ny bibidia voalohany mbola tsy nolazaiko fa ny bibidia faharoa kosa dia efa voalaza.
RBNIR - 23/03/2013 21:52
Dia mbola misaotra an'Andriamanitra hatrany fa nomeny fotoana kely indray mba hanohizana...
Fanontaniana : @ fomba ahoana kosa no hahafahan'ny bibidia faharoa (fikambanamben'ny filohampirenena @ izany fotoana izany) handresy lahatra ireo mponina rehetra manerana ny tany????
« Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibi-dia voalohany dia asehony eo anatrehany, ary ny tany mbamin'izay monina eo dia asainy miankohoka eo alohan'ilay bibi-dia voalohany, izay efa sitrana tamin'ilay feriny saiky nahafaty azy. » (Apok.13:12)
« Ary manao famantarana lehibe izy, ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo imason'ny olona aza. » (Apok.13:13)
« Ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena ary hatao eo imason'ny bibi-dia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibi-dia, izay voan'ny sabatra, nefa velona ihany. » (Apok.13:14)
Apok.13:12 "y fahefana rehetra nananan'ilay bibi-dia voalohany dia nampitaina tamin'izireo koa.
Hanao famantaraa lehibe izireo ka izany famantarana lehibe izany no entiny hamitahana ny mponina rehetra ambon'ny tany.
Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, Izy no nanome maimapoana, dia Izy ihany koa no nandidy mba hizarana maimaipoana.
RBNIR - 25/03/2013 10:30
Dia mbola faly miarahaba an-tsika namana rehetra hatrany ny tenako,
Ary koa mbola manandratra fisaorana lehibe ho an'ilay Andriamanitra tsitoha noho ny haben'ny famindrapony ka mbola afaka mifampizara eto hatrany.
H@ izao aloha dia mbola tsy voalaza mihitsy hoe iza ilay bibidia voalohany, raha sitrapon'ny Tompo dia tsy ho ela fa arao hatrany ny fizarana,
Araka ny apok.13:14 dia asain'ilay bibidia faharoa (fikambanam-ben'ny filoham-pirenena @ izany fotoana izany) hanao sary ho an'ny bibidia ny olona,
Inona ary ilay sarin'ny bibidia?
Ny atao hoe sary (image) : dia zavatra mitovy amin'ny ilay tena izy saingy tsy izy.
Ilay bibidia dia mitondra fanjakana (vala iray mitonona ho kristianina no tena marina).
Jehovah Andriamanitra, Jesosy Kristy Tompo ary ny Fanahy Masina ihany no asainy iankohofana ao saingy 1- Hiteny ratsy an'Andriamanitra izy satria holazainy fa devoly (fa tsy Andriamanitra )no mitarika ireo olona izay hitory ao @ ilay fitoriana lehibe farany, 2 hanenjika ny olona hitory ny fahamarinana izy ary hamono mihitsy aza.
3- hanova ny lalàna sy ny fotoana izay napetrak'Andriamaintra izy (ny tena hisongadina @ izany dia ny fanafoanana ny fit
Page rendered in 14.4980 seconds